Maitiro ekuisa Android Studio paGnu / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Pakati pese, masisitimu anoshanda ehupfumi anogara achishandiswa kugadzira maapplication eApple. Asi mumwedzi ichangopfuura, maturusi ekuvandudza eapps akaendeswa kune emahara mashandiro, masisitimu senge kugoverwa kweGnu / Linux.
Tevere tinokuudza maitiro ekuisa Android Studio, iyo Android app kuvandudza suite pane chero Gnu / Linux kugovera. Iyo yakapusa yakapusa yekumisikidza system kana isu tikatevera akasiyana matanho eichi chiitiko.
Kutanga isu tinofanirwa kuenda ku iyo yepamutemo webhusaiti uye tora iyo Android Studio yekuisa package. Kana tangova nazvo, tinovhura chinongedzo mune dhairekitori uko rakamanikidzwa faira iri uye tinonyora zvinotevera:
Iye zvino isu tinofanirwa kuisa iyo Java JDK, mutauro wakakosha wekugadzira Android maapplication uye Android Studio. Saka tinoenda ku iyo yepamutemo JDK webhusaiti uye tinoitora. Kana isu tine mugove unoshandisa rpm mapakeji, tinotora pasi pasuru mune iyi fomati uye kana zvisiri isu tinosarudza iyo package mune tar.gz fomati. Iye zvino tinovhura terminal uye toita inotevera mirairo:
Mutsara weshanduro unozoonekwa watinofanira kusarudza, mune ino nyaya isu tinosarudza iyo package yatakaisa. Mune yakapfuura kesi, isu takaisa vhezheni 1.8_092, dai yaive imwe yakagadziridzwa vhezheni, isu taizofanira kuchinja manhamba uye kusarudza yazvino vhezheni.
Zvino isu tagadzirira mhanya Android Studio inosimudza. Saka isu tinovhura iyo terminal uye tinyore zvinotevera:
Uye neizvi, yekugamuchira skrini uye yakapusa yekuisa wizard ichatanga. Kana tangopedza neiyo wizard tichava neApple Studio yakaiswa mukugovera kwedu. Zvino isu tinongofanirwa kugadzira edu maapp, asi icho chinhu chatinokuudza mune imwe chinyorwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Maitiro ekuisa Android Studio paGnu / Linux
Manheru akanaka ini ndaida kuwedzera kuti iyo sdk seyomushandisi weiyo studio studio yakashanda zvirinani kwandiri https://github.com/tuxjdk/tuxjdk iri forogo ye openjdk asi iine mashandiro ekuita linux. Ini ndinokurudzira zvikuru
Pindura kuna juan-gnu